Fikradaha xisaabta ee lagu qiimeeyo Fasalka Labaad waxaa ka mid ah:
Isticmaal qiimaha goobta si aad u sharaxdo lambarrada oo dhan inta u dhexeysa 10 iyo 1000 marka loo eego boqollaal, tobanaan iyo qaar. Ogow 100 waa 10 toban, 1000na waa 10 boqollaal. Akhriso, qor oo metelo tirooyinka oo dhan ilaa 1000. Muuji aqoon u lahaanshaha xaqiiqooyinka aasaasiga ah ee lagu daro iyo xaqiiqooyinka kala-goynta la xiriira. Xalliyaan dhibaatooyinka dhabta ah ee adduunka iyo xisaabta iyo kala-goynta ee ku lug leh tirooyinka oo dhan illaa illaa 2 lambar.
Aqoonsiga, abuur, sharax, oo isticmaal qaabab iyo qawaaniin lagu xaliyo dhibaatooyinka dhabta ah iyo xisaabta. Tusaale ahaan: Ka bood tirinta 5s laga bilaabo 3 si aad u abuurto qaabka 3, 8, 13, 18, .... Tusaale kale: Ururinta 7 kartoon oo caano madhan maalin kasta 5 maalmood waxay abuuri doontaa qaabka 7, 14, 21, 28, 35, taasoo ka dhalan doonta wadarta 35 kartoon oo caano ah. U adeegso weedho lambar oo ku lug leh isugeyn, kalagoyn, iyo waxyaalo aan la garaneynin si ay u metelaan xaaladaha dhibaatada la siiyay. Tusaale ahaan: Immisa ciyaartoy oo dheeri ah ayaa loo baahan yahay haddii koox kubbadda cagtu u baahan tahay 11 ciyaartoy oo ilaa hadda ay yimaaddaan oo keliya 6 ciyaartoy? Xaaladdaan waxaa matali kara tirada jumlada 11 - 6 = p ama tirada jumlada 6 + p = 11.
Aqoonsadaan oo magacaabaan qaababka aasaasiga ah ee laba-iyo-saddex-geesoodka ah, sida laba jibbaaranaha, wareegyada, saddexagalka, leydilaalka, trapezoids, hexagons, cubes, prumgulargular prisms, cones, cylinders and spheres. U sheeg waqtiga ilaa rubuc-saac oo kala sooco am iyo pm Aqoonso pennies, nickel, dimes iyo rubuc. Raadi qiimaha koox qadaadiic ah oo go'aamiso isku-darka lacagta qadaadiicda ah oo u dhigma qaddarka la siiyay.